Last updated: May. 21 2019 | 2 min akhri
Waxaan oo dhan la kulmay dad markii aan eegay fiican. Waxaan la kulmay deriskooda cusub markii engegsan cawska. Waxaan la kulmay booskaas cusub maalinta marka aan u dareerin kafeega maaliyada our. Sida Hadalku tagaa, annagu waxaan uun nahay heli mid ka fursad in la sameeyo aragti ugu horeysay. Waxaan doono, Si kastaba ha ahaatee, arki deriska iyo dadka kula shaqeeya naga badan tahay in ka badan waxaan rabnaa. Taariikhda A waa ka duwan yahay. First, ma jiraan wax damaanad ah in aad fursad u heli doonaa taariikhda kale. Labaad, iyadu ay u daryeeli ka badan oo ku saabsan muuqaalka badan deriskaaga ama booskaas. Ha welwelin, inkasta oo. Waxaan halkaan u joogaa inaan caawiyo 10 Date ka dhisan Talooyin First ee Ragga.
1. Labis heer rasmi dhacdada ka. Haddii dhawaad ​​walba nin kale oo makhaayadda xiran doono Jaakadda sports ah, waa in aad ma muujiyaan ilaa aan ka mid. Waa sahlan uga loogo hoos on Daqsi badan u samee haddii aad ka heli naftaada underdressed.
2. Dharka oo ku haboon cimilada. Aynu idinku leeyihiin qorsheyaal casho iyo ka dib casho taariikhda jeedinaya jidka soo socda, waayo, macmacaan. Waxaad doonaysaa in loo diyaar garoobo.
3. Gasho kabo fiican! No Mail waddada tooska ah ama kabaha tennis…haddii aad tahay xeebta ama ciyaaro tennis ah. Haweenka jecel kabaha iyo kuwaagii dareemi doonto.
4. Birta aad maaliyada. Waxaa laga yaabaa inaan ma aragto (ama daryeelka) haddii shirts naga loo xaliyo, laakiin iyadu doono ogeysiis u badan tahay (iyo daryeelka).
5. Xiro wax si fiican. taam ah dhar aad ka muhiimsan yahay astaanta ah, style ama wax kale. Waayo, kuwa idin jirrabay inuu xirto maaliyada a super dhagan…samayn ma…kaliya ma samayn…
6. Xiro wax aad ayaa loo isticmaalaa in oo raaxo. Gaar ahaan haddii aad u muuqdaan in ay aad u hesho habdhiska maalinta koowaad, naftaada siin yar wax ka mid ah in la walwalo.
7. Gasho suunka iyo hubi in uu kulan kabahaaga. Waxay ka dhigaysa mid aad u dhisan eegi ka dhameystiran.
8. Hel feedback. Weydii tarxiilaan, saaxiib, booskaas ama qof aad ku kalsoon tahay oo ku saabsan kooxda ka dhisan. Ma aha in aad si aad u kuu guntin, laakiin si fudud weydiinaya haddii aad eegto OK ka baxay aad ku caawin kara.
9. Ha xiran wax aad u daran ama olaga. Ma aha in aad si aad u labistaan ​​sida awoowe, laakiin ma doonayaan in aad dhar aad u adeegtaan kalajeedsadla'aan a. Laakiin waqti isku mid ah…
10. Naftaada! Haweenka jecel kalsoonida. Xiro wax ku muujinayaa shakhsiyadaada.